Caruurta | Radio Himilo
Home / Caruurta
La kulan – Carruurta nool waalid la’aanta
Ahmed Haaddi March 5, 2022
Himilo – Ilmaha aad u jeedaan ma noola hooyadii dhashay. Aabahoodna wuxuu ku jiraa xabsi. Waana rejay jaceylkii hooyo-nimada goor hore oo noloshooda ah waayay. Laakiin waxay heystaan bulsho jecel oo daryeelkooda degta saartay. Balse intaan idin la wadaagin kaalintaas ...
Ahmed Haaddi February 6, 2022
Himilo – Boqor Maxamed-ka Marooko ayaa tacsi u diray waalidiinta wiilka dhintay kaddib markii uu ceel ku dhacay maalintii Talaadada ahayd iyadoo tan iyo maalintaas-na la waday dedaallo lagu soo bad-baadinayay. Hase yeeshee Rayan ayaa ugu dambeyn laga soo saaray ...
Wiil harqaanle ah oo soo jiitay macaamiil u badan hablo
Ahmed Haaddi October 27, 2021
Himilo – Muddo sanado ah, wiilkan yar ee Falastiiniga ah oo lagu magacaabo Axmed Cabaas wuxuu daawan jiray sida uu aabbihiis u tolayo dharka, maalin ayuu soo qabsaday maqas kaddibna wuxuu ku jaray gabbal maro ah, taas oo aheyd markii ...
Ahmed Haaddi October 19, 2021
Himilo – Wiil yar oo 12 jir ah oo u dhashay Nigeria ayaa rajaynaya inuu mustaqbalka kubbada cagta adduunka ka dhex muuqdo, kaddib markii uu dhigay rikoor cusub oo kubadda cagta ah. Rikoorka uu dhigay ayaa ah inuu kubbada ku ...
China: Gabar ku huruday masrax ay bandhig ku lahayd
Ahmed Haaddi March 30, 2021
Hmilo – Daawadayaashii ayaa ka dareeray masraxa kaddib markii gabadhii la daawanayay ciyaarteeda ay hurdo kula dhacday masraxa ay saarneyd oo ay ku maaweelineysay dad badan. Gabar la socotay oo ay saaxiibo ahaayeen ayaa isku dayday dhowr mar inay kiciso ...
La kulan: Wiil da’yar oo Deero la saaxiibay!
Ahmed Haaddi January 31, 2021
Himilo – Haweeney la yiraahdo Stephanie Brown ayaa barteeda facebookaa waxay soo gelisay sawir ay aad ula dhoolla-caddeeyeen wejiyo badan oo adeegsata bartaas. Arrintaas waxay aheyd inay soo bandhigtay wiilkeeda oo lagu magacaabo Dominic iyo Deero yar oo saaxiibbo wanaagsan ...
Ahmed Haaddi January 30, 2021
Himilo – Ku dhawaad saddex meelood meel carruurta casrigan waxay bartaan adeegsiga taleefannada ama computer ka hor inta aysan hadal baran, warbixinta ayaa sidaas daah rogtay. Qiyaastii boqolkiiba 29 waxay adeegsiga ku billaabaan xilliga socod baradka, waxay jecel yihiin sawirada iyo ...
Sadia Nour January 9, 2021
Himilo – Jordy Gordon oo kasoo jeedda Scotland, waxa uu ahaa laba sano jir markii uu afka gashtay uu dabadeedna liqay daango, taas oo noloshiisa khatar galisay. Hooyadii Shona Macgillivray, ayaa ula carartay isbitaalka markii uu joojin waayay qufac, iyada ...
Sadia Nour December 27, 2020
Himilo – Siddhant Gumber, oo ku nool magaalada Abu Dhabi ee dalka Isutagga Imaaraadka Carabta, ayaa magaciisa lagu dhigay buugga Guinness World Record, kaddib markii uu daqiiqad gudaheed ku gartay kuna sheegay midabada 39 diyaaradood. 12-jirkan oo asal ahaan kasoo ...
Sadia Nour December 20, 2020
Himilo – Waxey ahayd saqdii dhexe markii hooygii ay deganaayeen qoys ka kooban hooyo, Aabe iyo seddax caruur ah oo ay dhaleen uu dab qabsaday magaalada Tazewell ee gobolka Tennessee ee dalka mareykanka. Nicole Davidson, hooyada reerka oo ku toostay dabka ...